बारियाको नयाँ ब्रान्डि यसको ढाल आधुनिकीकरण गर्न प्रतिबद्ध छ क्रिएटिव अनलाइन
एफसी बार्सिलोना यसको ढाल आधुनिकीकरण गर्दछ
जुडित मर्सिया | | सामान्य, लोगो
चर्चित बार्सिलोना फुटबल क्लब, बार्स, एक बनाउँछ ब्रान्डि investment लगानी अपडेट गर्न र नयाँ सार्वजनिकमा अनुकूलन गर्न। सब भन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन यसको ढाल मा अवलोकन गरिन्छ। परामर्श ब्रान्डिंग एजेन्सीले गरेको छ Summa, रणनीति, पहिचान, सक्रियता र ब्रान्ड व्यवस्थापनमा विशेषज्ञता प्राप्त।
एजेन्सी हाइलाइट गर्दछ अनुकूलन गर्न आवश्यक छ नयाँ समयमा, र शिल्डको अपडेटलाई आवश्यक विचार गर्नुहोस्। यो नयाँ डिजाइन रंगहरू बढाउनुहोस् निलो र रातो; लाई प्रमुखता दिन्छ बल र शिल्ड सेटको आकार र र simp्ग सरलीकृत गर्दछ।
1 तपाईंको ढाल मा फ्लैट डिजाइन मा शर्त
2 सातवटा परिवर्तनहरू बरिया ढालमा
तपाईंको ढाल मा फ्लैट डिजाइन मा शर्त
एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै भन्दा उत्कृष्ट ब्राण्ड को एक को उद्देश्य संग, बार्सिलोना एक डिजाइन को लागी प्रतिबद्ध छ समतल डिजाइन। एक अधिक सजातीय छवि को लागी रोजेको हो यसको आकार र सारलाई सम्मान गर्दै त्यो उसको चरित्र हो।
२००१ मा शिल्डको अन्तिम परिवर्तन बीचको भिन्नता पूर्ण रूपमा देख्न सकिन्छ, र कुलमा गणना गर्न सकिन्छ सात परिवर्तन.
सातवटा परिवर्तनहरू बरिया ढालमा
तल हामी बार्सिलोनाको छवि नयाँ ब्रान्डि audit अडिटमा आएको सात परिवर्तनहरूको नाम लिनेछौं।
हामी टाइपोग्राफीबाट शुरू गर्दछौं। एक्रोनिम हटाउनुहोस् शिल्डको मध्यभागमा अवस्थित एफसीबी, यस तरीकाले, हामी प्राप्त गर्छौं कि माथिल्लो र तल्लो भाग तिनीहरू बीच अधिक एकीकृत छन्।
La केन्द्रीय बलले प्रख्यातता प्राप्त गर्दछ। यो कालो लाइनहरु को लागी धन्यवाद खडा छ र अधिक केन्द्रित स्थिति मा छ।
Se सबै आन्तरिक लाइनहरु हटाउनुहोस् ढाल को। यसले हामीलाई क्लीनर छवि दिन्छ र डिजाइनमा सद्भाव ल्याउँछ।
Se कुल र reduce्ग घटाउनुहोस् सात देखि पाँच प्रयोग।
हामीले अघिल्लो बिन्दुमा छलफल गरेझैं रंगहरू घटाइन्छ र त्यस्तै हुन्छ पहेंलो। अघिल्लो शिल्डमा पहेंलोको दुई फरक शेडहरू देखा पर्‍यो। हाल यो केवल प्रतिबद्ध छ एक रंगीन दायरा.
उही उसको लागि जान्छ blaugrana, यो केवल एक मा एकीकृत छ।
अन्तमा, झण्डा पट्टिहरु तिनीहरू कुल पाँच मा कम छ।
आधिकारिक प्रस्तुती मिति अर्को हो अक्टोबरको लागि 20 जुन समितिको सभामा क्लब सदस्यहरूको स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिने छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » एफसी बार्सिलोना यसको ढाल आधुनिकीकरण गर्दछ
एडोब फोटोशप सीसी आईप्याडमा हिट हुन लागेको छ
ब्रान्डहरू र कलाकारहरू जो बैंकको द्वारा विनाशबाट प्रेरित छन्